Ny CMO dia tokony hihetsika amin'ny taona 2020 | Martech Zone
Talata, Desambra 17, 2019 Talata, Desambra 17, 2019 Jay Atcheson
Maninona ny fahombiazana dia miankina amin'ny paikady manafintohina.
Na eo aza ny fihenan'ny tetibola amin'ny marketing, ny CMOs dia mbola manantena ny fahafahany manatratra ny tanjony amin'ny taona 2020 araka Fanadihadiana momba ny fandaniam-bolan'ny CMO an'ny taona 2019-2020 an'i Gartner. Saingy ny fahombiazan'ny fanantenana dia tsy misy vokany ary CMO maro no mety tsy hanomana drafitra amin'ny fotoan-tsarotra mialoha.
Ny CMO dia mailaka kokoa noho ny tamin'ny resa-karena farany teo, saingy tsy midika izany fa afaka mihazakazaka izy ireo hivoaka amin'ny tontolo sarotra. Tsy maintsy mandeha manafika izy ireo. Mba hiroborobo amin'ity tontolon'ny fihenan'ny tetibola ity amin'ny fifehezana sy fanatomboana ny andrasana dia mila mampiasa am-pahendrena ny loharanon-karena i CMO, mandray ireo teknolojia vaovao ary mampifanaraka haingana hanovana.
Ireto misy fironana dimy mipoitra tokony hihetsika ireo mpivarotra hiantohana ny fahombiazany amin'ny taona 2020, sy ny sisa.
Fironana vaovao 1: Ampiharo ny rafitra fitantanana fananana nomerika
Ny hiakan'ny Mpanjaka ny votoatiny nanjaka nandritra ny taona maro fa rehefa mihatsara ny teknolojia, ny 2020 dia mety hitondra fahombiazan'ny votoaty mangarahara ho an'ny mpivarotra. Ny fahalalana ny atiny mahomby na mahomby dia mbola tsy asa mora raha tsy misy ny fomba fitehirizana ny fitahirizana ireo fananantsika haino aman-jery manan-karena. Rehefa ny taranaka ankehitriny an'ny Content Management System Ny sehatra (CMS) dia tonga tany amin'ny tsena, ny mpivarotra dia amidy tamin'ny fampanantenany fa afaka hampiasa azy ireo handaminana ny atiny izy ireo, saingy raha ny tena izy, ireo rafitra ireo dia latsaka a foibe atiny afovoany. Mba hihaonana bebe kokoa amin'ny filan'ny fitantanana atiny dia tokony hampiasa vola ny mpivarotra a rafitra fitantanana fananana nomerika (DAM) izay afaka mampiantrano ny fananany ara-barotra rehetra, manatsara ny fizotran'asa ary mizara tsara.
Ny rafitry ny DAM dia nanjary fitaovana haingana kokoa amin'ny fandaminana sy ny fanatsarana ny atiny manerana ny fantsona. Izy ireo dia ahafahan'ireo mpivarotra mihary mahomby kokoa satria afaka mampiasa bebe kokoa ny atiny efa misy izy ireo, fa tsy manery ny mpivarotra hamorona atiny vaovao isaky ny ilaina rehetra. Ny rafitry ny DAM dia afaka manome fanazavana momba ny karazana atiny miasa tsara indrindra amin'ny sehatra inona, mahomby kokoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampielezana.
Fironana misongadina: miakatra ny paikadinao manokana
Ireo mpivarotra no manery ny personalization valopy, dodona hanome ny traikefa mety ho an'ny mpanjifa tsirairay. Saingy alohan'ny hanomezan'ny mpivarotra fampanantenana dia tsy maintsy maka antoka izy ireo fa afaka manome valiny tadiaviny ireo mpiara-miasa aminy teknolojia. Fitaovana vaovao manandrana am-pahombiazana ny maha-izy azy manokana dia manasongadina ny fomba mety tsy hitrangan'ny ezaka manokana ataon'ny besinimaro ny fiantraikany tadiavina sy ny toerana misy ny fotoana lehibe.
Ny personalization dia dingana mitohy ary misy hatrany ny fanatsarana satria ny tetika nitondra valiny tsara tamin'ny taon-dasa dia mety hitondra fihenana mihena anio. Ny famolavolana atiny voafaritra manokana izay mihaona amin'ireo mpanjifa dia tsy maintsy miorina amin'ny personas vaovao sy ny fandrafetana ny mombamomba ny mpividy. Midika izany fa maka ny tampon'ny fahitana avy amin'ny angon-drakitra marketing rehetra - CMS, fantsom-pifandraisana, fisedrana UX, mailaka ary maro hafa - ary ny fampiasana azy ireo hamolavola hatrany ny paikadinao manokana hamoronana fiovam-po bebe kokoa amin'ny fampielezana.
Fironana vaovao 3: Velomy indray ny kolontsaina mifantoka amin'ny mpanjifa
Ny fanosehana mankany centricity ny mpanjifa amin'ny orinasan'ny B2C sy B2B, ny orinasa dia nahatonga ny mpivarotra handray anjara mavitrika kokoa eo amin'ny fikambanan'izy ireo - ary tsy mahagaga izany. Ireo mpivarotra dia manana ny fahaiza-manao mba hitrandrahana ny tanjon'ny fitondran-tena sy ny fomba fijeriny. Ny mpivarotra dia manam-pahaizana amin'ny serasera sy ny fiaraha-miasa ihany koa ary afaka mamaritra izay hisy fiantraikany lehibe amin'ny mpanjifa.
Nandeha ny andro nisamborana fahatakarana fototra momba izay tadiavin'ny mpanjifa, fizarana izany amin'ny ekipa mpitantana kaonty sy fametrahana azy amin'ny vato. Ireo mpivarotra dia omena hery hanentanana ny orinasa mifantoka amin'ny mpanjifa izay mitaky ny fanaovana sarintany ny dian'ny mpanjifa sy mamantatra ireo fotoana mety anaovana izany Wow mpanjifa.
Amin'ny taona 2020, ny mpivarotra dia mety ho lakaoly manambatra ny ekipa IT, varotra, asa ary fitantanam-bola miaraka hanamafisana ireo fotoana maha-marina azy ireo amin'ny dia nataon'ny mpanjifa. Izy ireo koa dia hanampy ny ekipa hafa ao amin'ny fikambanan'izy ireo hahatratra izay nofinofisin'izy ireo amin'ny mpanjifa amin'ny fomba azo ovaina.
Fironana vaovao 4: Miaraha-miasa mba hampivelarana ireo ekipa tsara indrindra
Famantarana sy manakarama talenta lehibe dia tena mifaninana, ary vao mainka mahazo izany. Amin'ity tontolo ity dia tokony hiara-miasa ireo mpikarama sy mpivarotra, satria ny marketing dia mety ho mpiara-miasa kritika amin'ny fahazoana talenta sy ny fihazonana azy.
Ireo mpivarotra ankehitriny dia afaka mampiasa ny herin'ny fahitana dizitaly mba hamaritana haingana izay fantsona miasa tsara indrindra, aiza ny mpihaino azy, ary inona ny hafatra hanampy anao hisongadina. Tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny tantaran'ny marika sy ny famoahana ny lanjan-tsamihafa ihany koa isika, izay afaka mandray soa avy hatrany amin'ny fizotran'ny fanangonam-bola sy ny fandraisana mpiasa.
Ny varotra anatiny hamoahana ny fanentanana ataon'ny mpiasa dia hampitombo ny referrals izay avo lenta kokoa ary manana tahan'ny fitazonana ambony kokoa. Ireo fitaovana fanentanana amin'izao fotoana izao dia mifamatotra mora amina rafitra hafa, azo idirana amin'ny fitaovana manokana ary afaka manangana fiakaran'ny mpiasa.
Raha ny ankamaroan'ny fikambanana dia nanadio ny azy ireo tolo-kevitra momba ny sanda ho an'ny mpiasa (EVP), ny kodiarana dia mety mbola tsy mihetsika. Ny fanetsehana ireo mpiasanao efa misy hanamafisana ny EVP anao dia loharanon-talenta mahomby sy mahomby.
Fironana vaovao 5: Manitatra ny fahatakarana data
Rehefa mihena ny teti-bolan'ny marketing, manjary manakiana ny mpivarotra indrindra ny angon-drakitra satria ny mangarahara dia manampy amin'ny fiantohana fa manatsara ny harenany ny orinasa, mahatratra ny vokatra ary mitazona ny lafiny fifaninanana. Zava-dehibe ny fananan'ny orinasa loharanon-karena hahatakatra ny vaovao ary hampiasana azy amin'ny fampiasana tsara sy ara-potoana, saingy mbola misy ny olana. Ny iray dia ny data tsy miovaova ankehitriny, mihidy amin'ny departemanta sy rafitra samihafa. Fanamby iray hafa ny tsy fahampian'ny manam-pahaizana momba ny angona ao anaty orinasa hanokatra ny dikany sy ny fahafahany feno.
Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny taona 2020, ny mpivarotra dia tokony hampiaraka ny angon-drakitra miampita amin'ny fifangaroana fitaovana entin-tsaina momba ny varotra izay ahafahan'izy ireo mahazo fomba fijery feno. Ny orinasa dia tokony hijery ihany koa ny fomba ahafahan'ny manam-pahaizana momba ny angona ao anatin'ny orinasa manazatra ny hafa, ka mpiasa maro no omena fahefana hahatakatra ny angon-drakitra iarahany miasa.
Ireo mpivarotra dia mpandray an-tserasera dizitaly, efa manana fironana hividy sy maodely mialoha. Ny fizarana an'io fahaiza-manao io any ivelan'ny departemantan'ny marketing dia manana tombony hanasoavana ny fikambanana iray manontolo ary hanala sarany sanda vaovao.
Misaotra noho ny fandrosoana rehetra natao tamin'ny alàlan'ny nomerika sy ny analytics, ny orinasam-barotra dia afaka mivezivezy mora foana hanararaotra. Amin'ity toekarena miovaova haingana ity, ny fahaizana mampifanaraka haingana sy mazoto manararaotra fotoana dia ny tsy fitovizan'ny fisintahana mialoha sy ny fihemorana. Ny fihisatry ny teti-bolan'ny marketing dia marika iray fa mitandrina ireo orinasa, ary ny mpivarotra dia tsy te-ho tratry ny tongotra malaky. Tsy fotoana izao ahazoana aina, fa hitadiavana fotoana hampitomboana ny ROI izay mety tsy tamin'ny taon-dasa.
Tags: 2020cmoCMO mandanykolontsaina mifantoka amin'ny mpanjifafironana vao misondrotragartnermampitombo roidata momba ny marketingbarotra tetikatalenta marketingekipa marketingfironana marketingpersonalizationekipa
Jay Atcheson no SVP an'ny Marketing ao R2i. Jay dia namidy ny vokatra sy serivisy nanerana an'i Etazonia, Kanada, Azia ary Eropa. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanavaozana sy ny vokatra azo avy amin'ny marketing, i Jay dia mpivarotra mifantoka amin'ny fitomboan'ny mpanjifa.